Degmada 742 waxay idinku soo dhaweynaysaa isdiiwaangalinta ama isqorista dhammaan deeggaanka iyo ardayda aaanan degaanka aheyn. Qoysaska ardayda cusub kasoo baddeli doono Iskuulada gaarka loo leeyahay, sida Iskuulada jaatarka, Iskuulka-guriga, Iskuulka lagu barto khadka interneedka ama Iskuulada dadweynaha ee ka baxsan xuduuddaha Degmada 742 aya loo baahan yahay ineey dhamaystiraan habka isdiiwaangalinta munaasabka ah. Qoysaska waxay booqan karaan Xarunta soo dhaweynta ee ku taala Discovery Community School si ay iskaga diiwaangaliyaan. Qoysaska wali kafakaraya ineey go’aansadaan messha ardaygooda u wanaagsan ayaa lagu casuumayaa ineey ka soo qeybgalaan dhacdada soo dhawaynta furitaanka Iskuulada ama ineey balan ka qabsadaan si ay Iskuulka u bartaan.
Xarunta Soo Dhawaynta 700 Seventh St. SouthWaite Park, MN320-202-6897